नियमपुर्वक कर्मचारी नियुक्ति गर्न लागेको झोँकमा कर्मचारीले कुटे डा. ठाकुरलाई
बिहीवार, माघ १, २०७१ साल,
सिमरा, माघ १ । करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा विवाद भएपछि कर्मचारीहरुले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) माथि कुटपिट गरेका छन् । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु रामशंकर ठाकुरलाई विकास समिति कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले बुधबार दिउसो कार्यकक्षमा नै कुटपिट गरेका हुन् ।
करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण गर्न दबाब दिँदै आएका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले मेसुले प्रक्रियामा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको भन्दै कुटपट गरेका हुन् । दिउसो ३ बजेतिर डा. ठाकुरको कार्यकक्षमा बैठक चलिरहेको अवस्थामा युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद कुर्मीसहित पाँच जना कर्मचारीले आक्रमण गरेका हुन् । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामदेव तिवारीका अनुसार डा. ठाकुरको कार्यकक्षमा विकास समितिका सदस्यहरुसँग छलफल भैरहेको समयमा कर्मचारीहरुले एक्कासी आएर आक्रमण गरेका हुन् ।
‘एक्कासी उहाँहरुको भिड आएर डा। ठाकुरलाई गालीगलौज गर्न थाले र केहीले हातपात समत गरिहाले,’ उनले भने, ‘जसोतसो मैले आफुलाई जोगाउन सफल भएँ ।’ नियुक्तिका विषयमा जस्तो दबाब आए पनि नियमभित्र नै रहने विषयमा छलफल भैरहेको समयमा कर्मचारीले आएर आक्रमण गरेको तिवारीले जानकारी दिए ।
गत सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा भएको निर्णय ठाकुरले नमानेको आरोप लगाँउदै कर्मचारी आक्रोशित भएको उनले बताए । उनका अनुसार बुधबारबाट करार सकिएका सात डाक्टरसहित १९ कर्मचारीको करार तीन महिना थप गरेर सोही अवधिभित्र प्रक्रियामा जाने निर्णय सिडिओ कार्यालयमा भएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने मेसु डा. ठाकुर र उनका ज्वाई डा. रामशिष ठाकुरले गुन्डा लगाएर कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन् । कुटपिटका कारण डाक्टर तथा कर्मचारी घाइते भएका छन् । अस्पतालमै कुटपिट भएपछि केही बेर अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द हुन पुगेको थियो । अस्पतालमा कुटपिटको विषयमा प्रहरीले अनुसनधान गरिरहेको छ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडी बढाएको जनाएको छ ।